Maxay tahay sababta dowladda Nigeria ay u mamnuucday sharoobada qufaca? - BBC News Somali
Maxay tahay sababta dowladda Nigeria ay u mamnuucday sharoobada qufaca?
Image caption Nigeria oo mamnuucday sharoobada qufaca
Dowladda Nigeria ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba mamnuuceyso soo saarka iyo in la keeno dalkaasi sharoobada qufaca oo ay kujirto maadada loo yaqaano Codein-ka.
Arrinta ayaa ka dambeesay baaritaan ay sameesay BBC-da oo lagu ogaaday in daawadaasi ay tahay mid sidoo kale si sharci darro ah looga iibiyo dad qabatimay isticmaalkeeda.
Afhayeen u hadlay wasaarada caafimmaadka ee Nigeria ayaa BBC-da u sheegay in haraadiga sharoobadaasi ee ku hartay suuqyada lagu iibin doono warqad qofka uu kala yimaado dhaqtarka.
Waxaa kale oo warbixinta lagu ogaaday in Farmashiyaasha ay daawada si sharci darro ah uga iibiyaan dad aan warqad ka wadanin dhaqtarka.
Siday ku dhacday in jiil dhan ay qabatimaan isticmaalka sharoobada qufaca?
Baaritaankan oo ay si wadajir ah u sameyeen BBC-da qeybta baaritaanada ee Africa Eye iyo BBC-da laanta af Pidgin-ka ayaa dalka Nigeria ka dhaliyay hadal heyn aad u weyn, waxaana dadka ka halay kamid ah xaaska madaxweynaha dalka Nigeria Caaisha Buhari oo sheegtay inay aad uga naxday qaabka loo adeegsado sharoobada qufaca, gaar ahaan waqooyiga Nigeria.
" Waxaan dhammaan laamaha ammaanka, sharci dejiyeyaasha, garsoorka, shirkadaha soo saara dawooyinka, ururrada rayidka, macallimiinta iyo waalidiinta ay tahay in arrintan u arkaan dagaal iyaga quseeya, oo ay joojiyaan khatartani'' ayay tiri Caaisha Buhari.
Hasayeeshe agaasime ku xigeenka warfaafinta ee wasaarada caafimmaaka waxaa uu sheegay in mamnuucida arrintan ay tahay mid ka dhalatay warbixin ay soo gudbiyeen guddi loo saaray inay ka soo tala bixiyaan daawooyinka sida khaldan loo isticmaalo.
Inkastoo dowladda ay sheegtay in daawooyinka imika haray lagu iibin karo warqad ka timid dhaqaatiirta, haddana dowladdu waxaa ay shirkadaha sameeya dawooyinka ay u sheegtay in marnaba daawada coddein-ka aanan loo isticmaalin doonin in lagu daweeyo qufaca.
" Kuwa doonaya inay dawadasi soo geliyaan dalka, waxaan u sheegaya in la mamnuucay'' waxaa sidaasi yiri Oshundun oo ah agaasime ku xigeenka warfaafinta ee wasaaradda caafimaadka.
Shaqaalaha shaqada laga eryay
Aqalka sare ee dalka Nigeria ayaa dawooyinka Coddein-ka ee maalin walba lag iibsado dalkaasi ku qiyaasay saddex milyan oo dhalo oo gudaha dalkaasi lagu isticmaalo.
BBC-da ayaa heshay muuqaal muujinaya madaxa shirkadda dawooyinka sameesa ee Emzor oo ku faanaya in toddobaadkii ba uu suuqa madow ku iibin karo hal milyan oo kartoon oo dawadaasi ah.
Ninkaasi ayaa markii dambe shaqada laga eryay, kadib markii BBC-du ay baahisay baaritankan.
Dawada Codeina-ka waa xanuun baabi'iye balse haddii la iska badiyo waxay dhaawacdaa xubnaha qofka
Hay'adda la dagaalanka maandooriyaha ayaa la dagaalanta faafinta maandooriyahan. Howgalkii ugu dambeeyey waxaa lagu soo qabtay 24,000 oo kaartoon oo saarnaa hal gaari oo kaliya magaalada Katsina.